Trano - Mpanampy Visa
Salama, Ahoana no hanampianay anao?
UPDATE: Misokatra indray ireo masoivoho amerikana. Manohy manara-maso ny valanaretina COVID-19 ny Visa Helper raha misy fanavaozana mikasika ny fifindra-monina sy ny dia.
Ianaro ny fomba hahazoana visa amerikana haingana sy mora.
Hanova ny menu
Maninona no matoky anay
Midira amin'ny tambajotra Visa Helper
Makà visa any Etazonia, tsy mila manahirana.
Ireo fitaovana matanjaka ao amin'ny sehatray, ny quiz ary ny toro-làlana mora takatra dia manohana anao amin'ny alàlan'ny visa amerikana sy ny dia fifindra-monina, isaky ny dingana rehetra.
Mianara mifindra monina sy mandeha miaraka amin'ny Visa Helper!
Visa ho an'ny fianakaviana
Visa amin'ny loteria Green Card
Visa fifanakalozana kolontsaina
Sehatra visa voalohany manerantany amin'ny tontolo.
Tsy mora ny fahazoana fankatoavana ho visa any Etazonia.
Betsaka ny dingana sarotra aleha, ny maze tsy misy farany amin'ny loharano an-tserasera, ary ny mamantatra azy irery dia mety hahagaga.
Izay no nahatonga anay nanao Visa Helper; ny ivon-toerana misy anao visa sy ivotoerana enti-miasa amin'ny fifindra-monina.
Na eo am-panaovana visa amerikana ianao na efa nanao fangatahana ary tafahitsoka eny andalana eny rehetra eny - ny torolàlana, ny fanontanina ary ny fitaovana no mitarika anao amin'ireo dingana hahazoana ny fankatoavan'ny visao, haingana kokoa.
Safidio ny firenenao.
Manome vaovao momba ny visa sy fifindra-monina amerikana natao ho an'ny firenena manokana ny sehatra misy anay.
Safidio ny firenenao eto ambany raha hijery raha manana torolàlana, loharano ary fampahalalana ho an'ny zom-pirenenanay izahay!
Avy aiza ianao? Albania Alzeria Angola Arzantina Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesy Belarosia Benin Bhutan Bolivia Bosnia sy Herzegovina Botsoana Brezila Borkina Faso Broney Bolgaria Cape Verde Kambodza Kamerona Tchad Shina Kolombia Cote D'Ivoire Costa Rica Kroasia Kiobà Repoblika Dominikanina Ekoatera Ejipta El Salvador Eritrea Ethiopia Gabon Gambia Georgia Ghana Guatemala Ginea Honduras Hong Kong India Indonezia Iran Irak Isiraely Jamaika Jordania Kazakhstana Kenya Koety Kyrgyzstan Laos Libanona Libya Makedonia Malawi Malezia Mali Maorisy Meksika Moldavia Monaco Mongolia Montenegro Maraoka Mozambika Namibia Nepal Nicaragua Niger Nizeria Oman Pakistan Palestina Panama Paraguay Però Filipina Qatar Romania Rosia Rwanda Arabia Saodita Senegal Serbia Sierra Leone Singapore Somalia Afrika Atsimo Sri Lanka Sodàna Tajikistan Tanzania Thailand Togo Tonizia vorontsiloza Turkmenistan Oganda Ukraine Emirà Arabo Mitambatra Uruguay Uzbekistan Venezoela i Vietnam Yemen Zambia Zimbaboe USA
-Ny fitsangatsanganana an-tserasera-
Ianaro ny fomba fangatahana visa any Etazonia ao anatin'ny 30 minitra.
Tsy mila handany ora be loatra amin'ny torimaso amin'ny fampahalalana ianao hamaliana ireo fanontaniana mifandraika amin'ny visa.
Ny fitaovana Visa Journey an-tserasera ataonay dia mampiasa fanontaniana safidy maro izay manenjana haingana ny toerana misy anao eo amin'ny visa na fifindra-monina.
Miorina amin'ny valinteninao, ny Visa Helper dia mitondra anao ireo torolàlana manokana sy fampahalalana mifanaraka aminao tokony harahinao mba hamindrana ny fangatahanao visa.
-Toro lalana mora azo-
Omano ny dingana manaraka, amin'ny minitra vitsy.
Ny torolàlana anay dia manaparitaka ireo lohahevitra sarotra momba ny visa sy ny fifindra-monina ho lasa dingana tsotra sy mora azo.
Ny torolàlana tsirairay dia misy fampahalalana vaovao izay tsy misy ifandraisany amin'ny toe-javatra manokana sy ny firenena niavianao.
Afaka minitra vitsy dia azonao atao ny mamaky ny torolalantsika, mahatakatra ny dingana manaraka, ary avy eo mandray andraikitra avy hatrany.
-Visa fitiliana fahazoan-dàlana-
Fantaro mialoha ny fahafahanao mahazo visa, alohan'ny mangataka akory.
Ny Visa Eligibility Test dia fitaovana entin'ny statistika afaka maminavina ny mety ho fahazoana visa any Etazonia.
Ny antony mahatonga ny mombamomba anao ary koa ny fifandraisan'ny firenenao sy Etazonia ankehitriny.
Miankina amin'ny isa azonao atao, azonao atao ny manapa-kevitra raha hampidi-doza ny fotoananao, ny vola ary ny ezaka ataonao amin'ny visa.
-Mifanaraha-miasa amin'ireo manam-pahaizana-
Fampiharana visa tsy misy risika, natao ho anao.
Ny fisoratana anarana amin'ny sehatra misy anao dia hanome anao fidirana manokana amin'ireo mpisolovava visa sy mpitsoa-ponenana, ary koa ireo matihanina amin'ny fikirakirana visa hatoky anao hamita ny fangatahana visa ho anao.
Ny mari-pahaizana sy ny lazan'ny mpiara-miombon'antoka dia voadinika tsara mba hahazoana antoka fa mifandray amin'ny mpiara-miasa tsara indrindra hanampy anao amin'ny raharaha visa ianao.
Mahazoa fidirana feno amin'ny sehatray amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana miaraka amin'ny fandoavam-bola kely indray mandeha.
2. Fanontaniana momba ny visa
Valio ny fanontaniana tsotra misy safidy maro hanampiana ny sehatra hampihenanay ny toerana misy anao amin'ny visa na fifindra-monina.
3. Manaova hetsika
Makà mpitari-dalana visa manan-danja sy voatokana ho anao, tombano ny fahafahanao mahazo visa miaraka amin'ny Visa Eligibility Test sy hiara-hiasa amin'ny fiaraha-miasa voamarina amin'ny antoko fahatelo.
$25 Wikibolana anglisy.
Mamoha feno androm-piainana fidirana amin'ny Visa Helper miaraka amin'ny fampiasam-bola kely, indray mandeha monja $ 25 USD fotsiny.
Ny maha-mpikambana dia misy:
Fandraisana amin'ny Visa Helper Platform
Fahazoana mpisolovava sy mpikirakira visa
Fitaovana fitsapana ny fahamendrehana Visa
Tari-dàlana Visa vaovao
Loharano sy bilaogy an-tserasera
Fanohanana ho an'ny mpanjifa natokana
Arovy amin'ny hadisoana mavesatra amin'ny fampiharana
Ny lesoka amin'ny fangatahanao visa dia mety hanemotra ny fankatoavana mandritra ny volana maro - na taona maro mihitsy aza.
Rehefa misoratra anarana amin'ny Visa Helper ianao, dia tsy hihena fotsiny ny fotoana tsy hanaovanao fikarohana ny zava-drehetra, fa hanana tanana manampy ianao hiaro anao amin'ny fanaovana hadisoana amin'ny fampiharana lafo.
Izay lazain'ny mpanjifanay:
Afaka nahafantatra tsara ny tokony hatao aho mba hialan'ny vadiko avy any Saudi Arabia amin'ny visa ho an'ny vady. Mora be ny fampiasana an'io sehatra io! Naharitra 10 minitra latsaka aho ary fantatro ny fomba fangatahana. Tsy afaka misaotra ny Visa Helper aho!
Sarotra ny niatrika ny masoivoho amerikana tany Russia, tsy fantatray izay hatao mba hampandehanana ny Fiance Visa anay. Hainay izao ny zavatra rehetra tokony ho fantatra momba ny dingana manaraka ataonay noho ny Visa Helper! Ataon'izy ireo tsotra ny zavatra rehetra ho fantatra. Ny vadiko dia nandray an-tànana ny visa-ny ary miaraka amiko any Etazonia.
Ny Visa Helper dia nanova tanteraka ny fiainanay mivady. Afaka nahatakatra ny karazana visa ilaiko aho, ny fizotrany ary ny dingana rehetra ilainay mba hahazoana antoka fa mahazo ny Visa-vadinay izahay. Manoro hevitra mafy ireo izay sahirana amin'ny raharaham-pirenenan'izy ireo hampiasa ny Visa Helper.
Nekena tao amin'ny Oniversite nofinofiko tany Virginia aho! Tsy nanana fotoana na fahalalana hampiharana ny tenako aho fa ny Visa Helper dia nanao azy ho tsotra. Tao anatin'ny 1 andro latsaka dia afaka nangataka Visa ho an'ny mpianatra aho.
Visa Helper no antony ahafahan'ny zandriko lahy tonga any Etazonia aorian'ny fiandrasana taona maro. Tsy nanan-kery aho ary tsy nahafantatra ny fomba hitetezana ilay rafitra, tamin'ny alàlan'ny fampiasana Visa Helper dia afaka nifandray tamin'ny mpisolovava iray aho hanampy anay amin'ny raharahanay. Tena tia an'i Visa Helper!
Tonga tany Etazonia ihany ny vadiko 7 taona rehefa avy nandany volana tamin'ny fikarohana momba ny fomba fangatahana Visa amin'ny fanambadiana. Misaotra Andriamanitra fa nahita Visa Helper aho. Mora tokoa ny mahazo ny torolàlana momba ny visa ataon'izy ireo. Adidiko amin'ireto olona ireto ny zava-drehetra, misaotra anao.
Abonné à nouveau Newsletter
Misorata anarana handray (isan-kerinandro) fanavaozam-baovao dia nalefa tany amin'ny boaty fampidirana anao.
Ny fiainanao manokana no laharam-pahamehanay. Tsiambaratelo tanteraka ny fampahalalana momba ny mailaka rehetra. Azonao atao ny misoratra anarana amin'ny fotoana rehetra. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fomba fanangonana, fitazonana ary fikirakirana ny mombamomba anao manokana ho fanajana ny GDPR, azafady zahao ny anay politika fiarovana fiainan'olona.
NY Tolotra serivisy, ny fitaovana ary ny fandinihana nomenay dia tsy torohevitra ara-dalàna ary ho an'ny tanjona vaovao ihany. Tokony hifandray amin'ny sainao ianao mba hahazoana torohevitra miaraka amin'ny fanajana ny olana na olana iray. Ny fampiasana sy ny fanatsarana ny tranokala WEB dia tsy mamorona mpiorina-CLIENT, na fifandraisana mitovy.
Copyright © 2020 Visa Helper - Zo rehetra voatokana
Ilaina tokoa ny cookies ilaina mba hiasa tsara ny tranokala. Ireo cookies ireo dia miantoka ny fiasa fototra sy ny endri-piarovana amin'ny tranokala, tsy fantatra anarana.
cookielawinfo-checbox-Analytics 11 volana Ity cookie ity dia napetraky ny plugin GDPR Cookie Consent. Ny cookie dia ampiasaina hitehirizana ny faneken'ny mpampiasa momba ny cookies ao amin'ny sokajy "Analytics".
cookielawinfo-checbox-miasa 11 volana Ny cookie dia napetraky ny faneken'ny cookie GDPR hanoratra ny faneken'ny mpampiasa momba ny cookies ao amin'ny sokajy "Functional".
cookielawinfo-checbox-hafa 11 volana Ity cookie ity dia napetraky ny plugin GDPR Cookie Consent. Ny cookie dia ampiasaina hitehirizana ny faneken'ny mpampiasa momba ny cookies ao amin'ny sokajy "Other.
cookielawinfo-checkbox-ilaina 11 volana Ity cookie ity dia napetraky ny plugin GDPR Cookie Consent. Ny cookies dia ampiasaina hitehirizana ny faneken'ny mpampiasa momba ny cookies ao amin'ny sokajy "Ilaina".
cookielawinfo-checkbox-fampisehoana 11 volana Ity cookie ity dia napetraky ny plugin GDPR Cookie Consent. Ny cookie dia ampiasaina hitehirizana ny faneken'ny mpampiasa momba ny cookies ao amin'ny sokajy "Performance".
jery_cookie_policy 11 volana Ny cookie dia napetraky ny plugin GDPR Cookie Consent ary ampiasaina hitehirizana raha nanaiky ny fampiasana cookies ny mpampiasa na tsia. Tsy mitahiry angona manokana.
Ny cookies mandeha ho azy dia manampy amin'ny fanatanterahana asa sasany toy ny fizarana ny atin'ny tranokala amin'ny sehatra media sosialy, manangona tamberina, ary fiasa amin'ny antoko fahatelo hafa.
Ny cookies an-tsehatra dia ampiasaina mba hahatakarana sy hamakafakana ireo indostrian'ny fampisehoana lehibe ao amin'ny tranonkala izay manampy amin'ny fanomezana traikefa mpampiasa tsara kokoa ho an'ireo mpitsidika.
Cookies mamakafaka no ampiasaina hahalalana ny fifandraisan'ny mpitsidika amin'ny tranokala. Ireto cookies ireto dia manampy amin'ny fampahalalana momba ny metrik ny isan'ny mpitsidika, ny tahan'ny fifamoivoizana, ny loharanom-pifamoivoizana sns
Ny cookies amin'ny dokam-barotra dia ampiasaina hanomezana ny mpitsidika dokambarotra mifandraika amin'izany ary fanentanana amin'ny marketing. Ireo cookies ireo dia manara-maso ireo mpitsidika manerana ny tranokala ary manangona vaovao hanomezana doka namboarina.
Ny cookies tsy voasokajy hafa dia ireo izay hadihadiana ary mbola tsy voasokajy ho sokajy mbola.
Ny serivisy, fitaovana ary famakafakana nomen'i Etazonia dia tsy torohevitra ara-dalàna sy ho fampahalalana fotsiny ary tsy tokony hiankina amin'ny toro-hevitra ara-dalàna na ny loharanom-baovao tokana anao. Tokony hifandray amin'ny mpisolovava anao ianao mba hahazoana torohevitra momba ny olana na olana manokana. Ny fampiasana sy fidirana amin'ny tranokala dia tsy miteraka fifandraisan'ny mpisolovava sy ny mpanjifa. Ireo hevitra sy famakafakana voalaza ao amin'ny tranonkala dia tsy lavorary ary ho fampahalalana fotsiny ihany. Na dia novokarina sy namboarina avy amin'ny loharanom-baovao heverina fa azo itokisana aza ny famakafakana angon-drakitra omena ao amin'ny tranonkala, dia tsy nanao izany izahay ary tsy tokony hiantehitra amin'ny fiantohana, voalaza na voalaza, natao momba ny marina, ny fahafenoana, ny fahafenoana, ny ara-dalàna, ny azo ianteherana, na mahasoa ny fampahalalana rehetra ato. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy manana andraikitra aminao izahay na inona na inona karazana vokatry ny fampiasana ny tranokala na ny fiankinan-doha amin'ny fampahalalana nomena an'ity tranonkala ity. Ny fampiasana ny tranokala sy ny fiankinan-doha amin'ny fampahalalana rehetra ao amin'ilay tranokala dia atahoranao irery.
Misaotra anao nanatevin-daharana ny Visa Helper! Natao ity tranonkala ity mba hialana amin'ny fisavoritahana momba ny visa sy ny dia amin'ny alàlan'ny fampisehoana aminao ny vaovao ilainao. Valio ireo fanontaniana mifandraika amin'ny visa izay ilainao fanampiana na tianao hangataka. Aza adino ny mamaly ireo fanontaniana ireo amin'ny fomba fijerin'ny mpangataka (Ilay iray izay mangataka visa.) Raha efa any Etazonia ianao ary mampiasa ny serivisinay ho an'ny olona iray tadiavinao, dia safidio ny safidy mety rehefa tonga izy ireo. miakatra Raha mila fanampiana ianao dia safidio ny bokotra mpanohana ary alefaso aminay ny fanontanianao.
Mbola tsy nangataka io visa io ianao, aza manahy! Voalohany, hataonay aminao ny fizahana ny Visa Eligibility Test. Ity quiz ity dia natao hanehoana aminao ny mety ahazoana io visa io amin'ny famaliana fanontaniana vitsivitsy momba ny mpangataka (Ilay mangataka visa). Izy io dia voarindra amin'ny alàlan'ny fampiasana angona tena izy momba ny fifandraisana politika, toekarena ary fiarovana eo amin'ny firenena mpangataka sy ny firenena kendrena. Ity fitsapana ity dia tsy natao ho marina tanteraka; ny tanjony tokana dia ny hanome anao vinavina hahazoana ny visa. Aza adino, ny fitsapana Visa Eligibility dia natao ho an'ny tanjona TSY MISY FAMPIANARANA IHANY, tsy tokony hampiasa ny valiny mihitsy ianao satria ny famaritana farany ny fangatahana satria ny tranga visa tsirairay dia raisina tsirairay ao amin'ny ambasady miankina amin'ny fahamendrehany.
Ho hitanao eto ny lisitry ny mpisolovava misahana ny fifindra-monina manana alalana, izay afaka manampy anao amin'ny fangatahana visa na hanampy anao amin'ny fangatahanao ankehitriny. Safidio ny sivana amin'ny ankavia izay mihatra amin'ny trangam-pizahanao mba hamerana ny mpisolovava izay manam-pahaizana manokana amin'ny karazana visa anao. Azonao atao ihany koa ny mitady mpisolovava manokana amin'ny anarany ao amin'ny bara fikarohana. Izahay dia tsy manao fampisehoana na fiantohana momba ny fiofanana na ny fahaizan'ny Mpamatsy. Tompon'andraikitra amin'ny fanombanana ny fahaiza-manaony sy ny fisafidianana ny mpamatsy anao manokana ianao amin'ny farany. Rehefa manohy mampiasa ny serivisinay ianao dia manaiky ny tsy hizara ny mombamomba ny mpisolovava na amin'iza na amin'iza.
Satria ny mpangataka dia tsy nangataka visa, dia handray ny Visa Eligibility Test ianao. MBA AZONAO AZONAO FA VALINY AMIN'NY VALINAO. Tsy misy fitaka amin'ny alàlan'ny fizotran'ny visa any Etazonia, ianao ihany no mahazo tombony amin'ity fitsapana ity. Ity fitsapana ity dia natao hanehoana aminao ny mety ahazoana io visa io amin'ny famaliana fanontaniana vitsivitsy momba ny mpangataka (Ilay mangataka visa). Izy io dia voarindra amin'ny alàlan'ny fampiasana angona tena izy momba ny fifandraisana politika, toekarena ary fiarovana eo amin'ny firenena mpangataka sy Etazonia. Ity fitsapana ity dia TSY natao ho marina tanteraka; ny tanjony tokana dia ny hanome anao ny fomba hahazoana ny visa. Ity fitsapana ity dia azo atao indray mandeha monja. Raha liana amin'ny fanadinana visa hafa ianao dia afaka mamorona kaonty vaovao. Azonao atao ny miverina mijery ny valinao eo ambanin'ny safidy "My Account" etsy ambony. Azafady, mariho fa ny fitsapana Visa Eligibility dia ho an'ny tanjona INFORMATIONAL IHANY, tsy tokony hampiasanao ny valiny satria ny anton-javatra farany mamaritra ny fangatahana satria ny tranga visa tsirairay dia raisina tsirairay ao amin'ny ambasady mifototra amin'ny fahamendrehany.
Ho hitanao eto ny lisitra ho an'ny mpitari-dalana visa rehetra izay manokana amin'ny firenenao. Mikaroha ny firenenao ao amin'ny drop-drop, avy eo safidio ny mpitari-dalana visa tianao hojerena. Azonao atao ny miverina amin'ity pejy ity amin'ny tsindrio "My Visa Journey" etsy ambony, avy eo misafidy "Ahoana ny fomba fampiharana".
Ho hitanao eto ny lisitr'ireo mpiara-miombon'antoka antoko fahatelo voamarina fa azonao ampiasaina hampiharana ny visa. Ny mpiara-miasa rehetra dia voamarina araka ny fenitry ny Visa Helper. Azonao atao ny manindry ny mpiara-miasa amin'ity pejy ity mba hitodihana any amin'ny tranonkalany. Manaiky ianao fa ny fiankinan-doha amin'ny mpamatsy na fampahalalana omen'ny serivisy dia atahoranao irery ary tompon'andraikitra tanteraka amin'ny risika rehetra mifandraika amin'izany ianao.